TV-yada LG waxay sidoo kale la jaan qaadayaan AirPlay 2 | Waxaan ka socdaa mac
TV-yada LG waxay sidoo kale la jaan qaadi doonaan AirPlay 2
Toddobaadkan gudihiisa, CES ayaa la qabtay, carwadii ugu weyneyd ee tikniyoolajiyadda macaamiisha ee Las Vegas, oo ah carwo halkaas oo lagu soo bandhigo waxyaabaha cusub ee ka iman doona soo saarayaasha waaweyn. Samsung ayaa ku dhawaaqday Axadii la soo dhaafay in 2019-kaaga, iyo 2018 TV-yada adoo adeegsanaya cusbooneysiinta firmware, waxay noqon doonaan kuwa iswada waafaqsan.
Maalin kadib, waxay ahayd shirkadda Kuuriya ee LG, shirkadda kale ee telefishanka soo saarta ee suuqa ku taal, taas ayaa ku dhawaaqday moodooyinka cusub ee laga bilaabay suuqa waxay la jaan qaadayaan AirPlay 2, Si kastaba ha noqotee, si ka duwan Samsung, ma soo sheegin haddii moodooyinka la bilaabay 2018 ay la jaan qaadayaan Samsung.
Laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale la jaan qaadi doonaan HomeKit, taas oo noo oggolaan doonta inaan xakameyno aaladaha casriga ah ee kala duwan ee ku xiran gurigeenna iyada oo loo marayo amarrada Siri. Waxa aan ka heli doonin moodooyinka cusub ee 2019 LG waa codsi iTunes Movies ah oo haa ah Waxay sidoo kale na siin doontaa labadaba qaababka 2018 iyo kuwa ay bilaabi doonto sanadka 2019 oo dhan.
AirPlay 2 waafaqsanaanta TV-yada LG iyo Samsung, labada shirkadood ee TV-yada ugu waaweyn dunida, muuji sida Apple u doonayo inuu ugu fidiyo suuqyada kale iyo adeegsadayaasha, sida uu ku xaqiijiyay Phil Schiller qoraalkiisa uu ku xaqiijiyay iswaafajinta Samsung TVs ee AirPlay iyo iTunes Movies.
Laakiin sidoo kale waa tallaabo kale oo dheeraad ah oo lagu awoodo in lagu gaaro dad aad u tiro badan iyada oo loo marayo adeegga fiidiyowga soo socda ee soo socda, oo ah adeeg sida ay sheegayaan wararka xanta ah qaarkood, ayaa ku dhici kara suuqa inta lagu jiro rubuca hore ee sanadka, waa wax aan garaneynin Apple.
Daahfurka AirPlay 2 ee moodooyinka cusub ee LG iyo Samsung, waxay dhabarjab culus ku noqon kartaa iibka Apple TV, qalab laga tagi karo suuqa, maadaama aysan muhiim noqon doonin in loo diro waxyaabaha ku jira iphone-keena, iPad-ka ama Mac-da telefishankeena, waa mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee ay na siiso, haddii aanu ahayn kan ugu weyn, maadaama waafaqsanaanta ciyaaraha ayaa wali aad u hooseeya maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » TV-yada LG waxay sidoo kale la jaan qaadi doonaan AirPlay 2
Spotify loogu talagalay Apple Watch ayaa ugu dambeyntii la cusbooneysiiyay si looga faa'iideysto cabirka shaashadda ee Taxanaha 4